ဇူလိုငျ 17, 2018 – Healthy Life Journal
နှလုံးကျန်းမာဖို့ ဘယ်လိုအိပ်စက်အနားယူရမလဲ . .
မှောက်အိပ်ရင် ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပိုကိုယ်အလေးချိန်က သင့်နှလုံးပေါ် ဖိအားသက်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ နှလုံးက ပုံမှန်အတိုင်းသွေးတွေကို လှည့်ပတ်နိုင်ဖို့ ပိုအားထုတ်ရပါတယ်။ နှလုံးဝန်ပိသွားပါတယ်။ ဒီလိုနှလုံးပေါ်မှာ ဒဏ်ဖြစ်နှုန်းလျော့ကျစေဖို့ ပက်လက်လှန်အိပ်ပါ ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ညာဘက်စောင်းပြီး အိပ်စက်ပါ။ ဒီနည်းက...
ကြက်သွန်ဖြူက ကိုလက်စထရော ကျစေသလား
မေး. သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောကျအောင် ကြက်သွန်ဖြူစားပါလို့ ပြောကြပါတယ်။ မှန်ပါသလားရှင့်။ ဒေါ်တင်မေ၊ အလုံ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. မှန်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူက သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောဓာတ်ကို ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြက်သွန်ဖြူစားပြီးရင် ပါးစပ်နံတတ်လို့...
တံတွေးစေးပျစ်တာ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ …
မေး. သမီးမောင်လေးပါ။ အသက်က ၂၀ရှိပါပြီ။ သူက လက်ဖက်ရည်သောက်ပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အစားတစ်ခုခု စားပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလက်ဖက်ရည်အစအနတွေ အစာတွေက သွားနဲ့ကပ်နေတယ်။ တံတွေးက စေးကပ်နေတယ်။ ညအိပ်နေရင်လည်း တံတွေးတွေ ပါးစပ်ထဲပြည့်လာလို့ ထထထွေးရတယ်။ သွားဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြတာလည်းစုံနေပြီ မသက်သာဘူး။ သမားတော်နဲ့ပြတော့လည်း ဆရာက...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ(၉)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အ၀န်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘ၀နှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှန်လေလား အမှားလားဟူသည်ကို...
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း လနဲ့ချီပြီး အရမ်းငိုတဲ့က လေးလေးတွေကြောင့် ဖေဖေမေမေတို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ စိတ်တွေပူ၊ ချော့မရနဲ့ ကိုယ်ပါရောငိုချင် လောက်အောင်ဖြစ်ရတဲ့ အချိန်မျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ အဲ့လိုကလေးလေးတွေကို Colic Crying Baby/Unsettling Baby လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ နှစ်ပတ်ကနေ လေးလအတွင်း...
၉၉နှစ်အရွယ်တွင် ကင်ဆာကို အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ဘိုးဘိုး
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အသက် ၉၉ နှစ်အရွယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စစ်ပြန်အဘိုးအိုဟာ ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ကင်ဆာ အနိုင်ယူနိုင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗစ်တာမာစတန်ဟာ မေ ၈ ရက်နေ့က ဗိုက်အောင့်တာကြောင့် ဆေးရုံကိုပြေးခဲ့ရပြီး သူရဲ့အူမှာ ကင်ဆာအကျိတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်ကယ်ခွဲစိတ်မှုအပြီး ၁၂ ရက်အကြာမှာ...